Matipi mashanu ekuda kuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo naCristina LF kuburikidza neFlickr: https://www.flickr.com/photos/xanetia/
Munyika mune vanhu vazhinji vanoyemura avo vamwe vanoverenga uye tsika yekukochekerwa pabhuku iri yega. Nekudaro, ivo pavanoedza kutanga kuverenga vanotombopasa peji repiri, vachifunga kuti pamwe mabhuku haana kugadzirirwa ivo.
Tevera izvi Matipi mashanu ekuda kuverenga uye kunyangwe kuverenga zvimwe kuchaita iyi mwedzi yezhizha nguva yako yekutanga yekutamba.
1 Tanga nemabhuku ebhizinesi
2 Usaverenge uchisungirwa
3 Tsvaga iyo nguva
4 Tora nguva yako
5 Uye sarudzo yekutaura nyaya?
Tanga nemabhuku ebhizinesi
Kunyangwe vazhinji vachirutsa tupukanana pamabhuku akaita seTwilight kana 50 Shades yeGrey, hatingarambe magineti akafanirwa nesaga mbiri kana zvasvika pakukwezva vaverengi avo vakavhura bhuku kashoma kare. Kutanga nekuverenga zvakanakisa-mutengesi kunobatsira iwe kufarira kuverenga, kushanda sebhiriji kune dzimwe nyaya dzakawanda kuti udye mune ramangwana.
Kuchikoro vakatiita kuti tiverenge mamwe mabhuku, ayo anopfuura rimwe chete raive risinganzwisisike. Nekudaro, mukukura, sarudzo yebhuku chero ripi zvaro rakanaka, ringave bhuku rekuzvibatsira kana mavhoriyamu epakutanga aDon Quixote. Mubvunzo ndewokuwana kuverenga kunotikodzera zvakanyanya uye kuti, neimwe nzira, kunokwezva kwatiri, saka kana ukatanga bhuku uye ukasarifarira, risiye! Ndine chokwadi chekuti pachave nerimwe rezviuru zvemabhuku zvakanyorerwa iwe.
Tsvaga iyo nguva
Panzvimbo yekuita kupenga nePokémon Enda uchikwira chitima kuenda kubasa, funga kutsiva nguva idzodzo pakati penzendo kutanga bhuku rakanaka. Kana iwe uri iwe, iwe uchida kuverenga kuti uzorodze, sarudza kudya bhuku pakupera kwezuva pasina makomputa, zvirongwa zvepa terevhizheni kana nhevedzano pakati. Kana pamwe iro gungwa ndiyo nzvimbo yakanaka yekutanga bhuku. Mumwe nemumwe anofanira kuwana nguva yake.
Tora nguva yako
Sezvandakakuudza nguva yadarika, kuverenga kunonoka kunotarisana nekuwanda kwekuverenga izvo zvinotibvumidza isu kuti "tinhuwise" zvirinani nyaya idzodzo dzataiwanzo verenga dzichimhanya kuti tienderere mberi kuchitsauko chinotevera kana kuchipedza. Kana uchiverenga, uye kana uchifarira bhuku racho, shandisa nguva yakawandisa sezvaunoda, unakirwe naro, tsvagurudza uye edza kuzvinyudza zvakanyanya sezvinobvira munyaya.
Uye sarudzo yekutaura nyaya?
Munhu ari kungotanga kufarira kuverenga anowana vhoriyamu yaDon Quixote uye poindi yekusafarira inokwana saizi yayo kukurudzira hunyope hwakakura. Nhau uye mamwe mafomu ekutaura nyaya pfupi ave nemakore akaiswa sekuverengwa kwevanhu vakabatikana zvakanyanya kana vane shoma nguva yekuverenga. Neiyi nzira, iwe unodya imwe nyaya husiku humwe, uye nekudaro izere bhuku.
Izvi Matipi mashanu ekuda kuverenga Ivo vanozokubatsira kunyudza iwe mune nyika yetsamba iyo iwe yawagara uchida kusungirirwa pairi asi yausingakwanise kuwana nguva, chishuwo kana, kunyanya, mabhuku akakodzera.
Uye iwe, unowanzoverenga zvakawanda here? Wakava netsika yekuverenga here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Matipi mashanu ekuda kuverenga
Ana atogadziriswa.Ruregerero nekukanganisa. Shuwiro yakanakisa.
Vachave vaviri Rwiyo rweChando neMoto mabhuku achaburitswa panguva imwe chete?